Ukuba Uziva Uphoxekile Kubudlelwane Bakho, Yenza Ezi Zinto Zisixhenxe - Ubudlelwane
Ukuba Uziva Uphoxekile Kubudlelwane Bakho, Yenza Ezi Zinto Zisixhenxe
“Ugh. Andikholelwa ukuba bayenzile loo nto. Le ayiyonto endiyibhalisileyo. ”
Yiloo nto ehamba ngengqondo yakho xa uziva uphoxekile kwiqabane lakho.
Ukhe weva ngaphambili, ngaba ndinyanisile?
siyabenzakalisa abo sibathandayo
Inyaniso kukuba, sonke siye saphoxeka kubudlelwane bethu ngaphambili. Kungenxa yokuba akukho buhlobo obufezekileyo.
Kodwa ufanele wenze ntoni xa uziva ngale ndlela? Ngaba ubudlelwane bakho buzokungaphumeleli okanye ungazilungisa izinto?
Masiqale ngokwenza umahluko phakathi kweentlobo ezimbini zokuphoxeka…
Ngokukodwa Vs. Ukudana ngokubanzi
Ngaphambi kokuba siphonononge iindlela zokujongana nolwalamano lwakho, kufanelekile ukuthi ukuphoxeka kuza kwiincasa ezimbini.
Eyokuqala inxulumene nesikhalazo esithile onaso neqabane lakho. Luhlobo lokuphoxeka oluhlala luvela rhoqo xa, kuninzi ukungakuthandi, baziphatha ngendlela echasene neminqweno yakho.
Mhlawumbi bashiya imfumba yeempahla ezimdaka kwigumbi lokuhlambela, banyikime kade ukuya kwitheko lokuzalwa lomhlobo wakho ngenxa yokuba bexakeke kakhulu yimidlalo, okanye bachitha ubusuku bakho unamathele kwifowuni yabo .
Emva koko kukho uhlobo ngokubanzi lokuphoxeka. Ukuziva ngathi izinto aziyiyo le nto ungathanda ukuba babe…
… Xa ela lizwi entlokweni yakho liqala ukuthetha izinto ezinje, 'ayingabo abo bendicinga ukuba bangabo' okanye, 'ngaba le yindlela ekumele ukuba ibenjalo?'
Gcina lo mahluko engqondweni xa ufunda lonke eli nqaku. Kuxhomekeke kwimeko ozifumana ukuyo, iindlela zokujongana nayo zahlukile kancinane.
Ukukhokela phambili kwezi ntlobo zimbini zokuphoxeka, lixesha lokuba ufike entliziyweni yento ekudanisayo.
Ngaba uyacaphuka kuba uxelele iqabane lakho kumaxesha amaninzi ukuba into abayenzayo iyakucaphukisa, kodwa bayaqhubeka bayenza?
Ngaba uziva uphantsi malunga nolwalamano kuba iziva indala kwaye iyadika ?
Ngaba iqabane lakho lityhile ngesiquphe uhlobo oluthile lobomi olungahambelaniyo namaphupha akho (umzekelo, bafuna ukuhlala kwindawo ethile, okanye abafuni bantwana)?
Ukwazi ukuba kutheni uziva ngale ndlela wenza ngayo kubalulekile ekufumaneni eyona ndlela yokujongana nale meko.
Uziva Njani Olu Dano Kuwe?
Ukudana ligama elibanzi elinokubandakanya zonke iintlobo zeemvakalelo. Zibuze ukuba yintoni kanye kanye le uziva ngayo.
Mhlawumbi ukuphoxeka kwakho kubonakalisa ukuba lusizi. Ulusizi kuba iqabane lakho lenze into ongayithandiyo okanye kuba ulwalamano lwakho aluyiyo le nto ubuyinqwenela.
Okanye mhlawumbi ubonakalisa ingqumbo kwiqabane lakho okanye kwihlabathi ngokuzisa ezi meko ebomini bakho.
Ngaba iintloni yinxalenye enkulu yokuphoxeka kwakho? Ngaba uziva uneentloni ngenxa yemeko yobudlelwane bakho kunye nendlela ilizwe langaphandle elijonga ngayo kunye nawe?
Ukuchonga umxube ochanekileyo weemvakalelo oziva ngathi kubalulekile. Ukuba ufuna ukonwaba kubudlelwane bakho, kuya kufuneka ujongane nomnye kubo.
Kwaye ngelixa usenokukwazi ukujongana nabaninzi ngeendlela ezifanayo, abanye banokufuna isenzo esithile ngakumbi ukujolisa kuloo mvakalelo.
Kutheni iqabane lakho linokuziphatha ngale ndlela?
Ukuba ukuphoxeka kwakho kunxulumene nento ethile eyenziwe liqabane lakho, kububulumko ukubuza ukuba kutheni bekwenzile oko.
Abantu ngamanye amaxesha benza ngeendlela ezingabonakalisi isimilo sabo sokwenyani. Banokuthi kamva bazisole ngezi zenzo, kodwa ngexeshana nje abanandaba.
Zininzi izizathu zokuba kutheni le nto ingenzeka…
… Kungenzeka ukuba babe noxinzelelo ngento ethile emsebenzini.
… Banokudinwa ngokwenene.
… Banokuba nexhala malunga nomsitho ozayo.
… Banokuba betsala nzima ngomba wezempilo yengqondo.
Ngaphambi kokuba uvumele ukudana kwakho kuchaphazele ubudlelwane kakhulu, zama ukungena kwizicathulo zeqabane lakho kwaye uzive ukuba banokuziva njani.
Sebenzisa uvelwano lwakho ukukunceda uchaze (hayi ukuthethelela) indlela abaziphethe ngayo kunokukunika ukuqonda okukunceda ukulwa nokudana kwakho.
Inokukuvumela ukuba ubancede kwaye ubaxhase ngayo nayiphi na into ephazamisa iingqondo zabo.
Amanyathelo ama-7 okujongana nokudana kobuhlobo bakho
Ukuze ujongane neemvakalelo zakho, kuya kufuneka uhambe amanyathelo amaninzi kangangoko unakho.
Ngamnye uya kukunceda usebenze ekuphoxekeni kwaye ufikelele kwinqanaba lokucaca malunga nolwalamano lwakho.
1. Kuphephe Ukucinga “Xa kufanelekile”
Ukuze uphoxeke ngumntu okanye into ethile, kuya kufuneka ukwazi ukuthelekisa esinye isiphumo, esifanelekileyo.
Kwimeko yakho, unokuthelekisa imeko kunye nolindelo lwakho kuyo.
Unokucinga ukuba 'kufuneka ube nazo' malunga nendlela izinto ezimele ukuba ngayo.
Umzekelo, unokucinga ukuba iqabane lakho yinto ekufanele ubenayo bakhuphe inkunkuma kuba ngumsebenzi wabo lowo.
Okanye bona yinto ekufanele ubenayo Ufumanise ukuba uziva uphantsi kwaye wazama ukukuvuyisa endaweni yokwenza ngokungathi akukho nto iphosakeleyo.
Usenokucinga ukuba ulwalamano lwakho yinto ekufanele ubenayo ikwenze uzive wonwabile ngalo lonke ixesha, endaweni yokuphakama kunye neelows ohlangabezana nazo.
Zibuze ke ukuba ingaba ubulindele ukuba imeko inokwenzeka na. Kungenxa yokuba isiphumo besingeyiyo le nto ubuyifuna, ngaba ngenene unokuziva uphoxekile?
Ingayiyo ulindelo lwakho beluphezulu kakhulu . Mhlawumbi umphumo wawusengqiqweni kunokuba ubonakala kwaye unokwaneliseka ngawo ukuba unokuyeka ukucinga ukuba indlela yakho kuphela kwendlela.
Kuyafana nakulwalamano luphela. Ngaba ubeka uxinzelelo olukhulu kuyo ukusombulula iingxaki zakho kwaye wonwabe? Ngaba nabuphi na ubudlelwane buhlala buhlala buhambelana nezi njongo?
Ewe ezinye zeendlela zokuziphatha azifanele zamkelwe okanye zilindelwe. Kwezi meko, kuya kufuneka ujonge imeko ngezinye iindlela.
2. Linganisa Oku Okubi Nxamnye Nentembeko
Ukuba uphoxekile yinto ethile eyenziwe liqabane lakho okanye engakhange liyenze, sukuyijonga wedwa loo nto.
Endaweni yoko, zama ukukhumbula zonke izinto ezilungileyo malunga neqabane lakho. Sonke sinamaphutha kwaye asinakulindeleka ukuba senze ngokugqibeleleyo i-100% yexesha.
Ngaba iqabane lakho linomdla okanye licinga ngezinye iindlela nokuba uziva uphoxekile kule meko?
Zithini iingongoma zabo ezilungileyo? Yintoni ekwenze thandana nabo ekuqaleni?
Ubudlelwane bunzima kwaye zifuna ukuba nenze isivumelwano. Kuya kufuneka ulinganise izinto ezichasayo ngokuchasene nezinto ezintle.
Ukwenza njalo kuvumela ingqondo yakho yangoku ukuba itshintshele kokunye okuxolela ngakumbi nokuqonda.
Ukuba ukuphoxeka kwakho kuqhelekile, lo msebenzi ungakunceda ubone ukuba izinto zisenokungabi mbi ngendlela ocinga ngayo. Okanye inokuqinisekisa ukuba bakho, kwimeko apho uya kufuna ukuqhubeka ufunda de kube sekupheleni.
3. Beka Ixabiso Kuyo nayiphi na into edanileyo
Inkulu kangakanani into ekufumanisa ukuba iyadanisa?
Ngaba yinto encinci ukuba kwenzeke ukuba ufumanise ukuba iyacaphukisa? Okanye ngaba yinto ebaluleke ngakumbi ebangela ukuba ubuze ngolwalamano lwakho?
kutheni ndifuna ukuba ndedwa ngalo lonke ixesha
Yinike amanqaku aphume kwi-10 kunye no-1 ukuba yinto encinci yokucaphukisa kwaye i-10 ibe ngu-a ukungcatsha okunzulu .
Emva kokuqwalaselwa ngononophelo, uya kufumanisa ukuba ufumana amanqaku esehlo asezantsi kakhulu kunokuba unokubonisa ukukhathazeka kwakho kokuqala.
Kwaye ukuba into ngu-2 okanye u-3 kwabali-10, ngaba kufanelekile ukuba ucaphuke malunga nayo?
Ewe, izinto ezincinci zibalulekile, kodwa azinamsebenzi kangako nezinto ezinkulu (njengalezo zilungileyo uzibonileyo kwinyathelo elidlulileyo).
Lo msebenzi uvumela ukuba ulungelelanise ukuphoxeka kwakho kwaye ukubone njengento enye phakathi komfanekiso omkhulu.
4. Buza into onokuyenza
Ubudlelwane yintsebenziswano phakathi kwabantu ababini kwaye unelizwi kwindlela eyenzeka ngayo imeko.
Ke ukuba kukho into ongonwabanga kwaphela ngayo, cela ukuba ungazilungisa njani izinto.
Ukuba iqabane lakho lilahla kwisabelo salo semisebenzi yasekhaya, mhlawumbi ungaphinda uhlele ukuba ngubani owenzayo ukwenza kube lula kubo.
Okanye ukuba bafuna ngenene ukulandela ikhondo elitsha, kodwa ayisiyiyo oyamkelayo ngokukodwa, cinga ngendlela onokuzilungelelanisa ngayo iimvakalelo zakho neminqweno yabo.
Zikhumbuze rhoqo ukuba unamandla okuphembelela imeko yobudlelwane bakho. Kungenxa yokuba uphoxekile ngento ethile, oko akuthethi ukuba awunakuzenzela ekwenzeni ngcono.
Nokuba udanile kulwalamano luphela, usenokuzama ukuba ngulo uqhuba izinto ngendlela esempilweni.
5. Musa ukubeka ulonwabo lwakho ezandleni zeqabane lakho
Sithethe ngaphambili malunga nolindelo olungenakwenzeka lokukholelwa ubudlelwane okanye iqabane linokukonwabisa.
Kwinyani, ukonwaba kwakho ayisiyonto onokuthi udlulisele uxanduva komnye umntu okanye kwenye into.
Ngumthwalo onzima kakhulu kwiqabane lakho okanye kubudlelwane bakho.
Ewe, ubudlelwane bakho bunokuzisa ulonwabo, kodwa akufuneki kuthenjelwe ngaphezulu kwayo yonke enye into.
Ukonwaba kwakho yinto ekufuneka uyithathele kuyo uxanduva.
Ke, ukuba udanile kulwalamano lwakho okanye indlela iqabane lakho eliziphethe ngayo ngenxa yokuba uziva ngathi lukubandezile ulonwabo, kufuneka utshintsho kwindlela ocinga ngayo.
6. Yenza indawo evulekileyo nengagwebiyo yoNxibelelwano
Unxibelelwano luyinto ebalulekileyo nakweyiphi na ubudlelwane obuphilileyo . Inikwe.
Kodwa ayilulo lonke unxibelelwano olusebenzayo ekusombululeni iingxaki isibini esinokujamelana naso.
Isitshixo kukudala imeko apho amaqabane angathetha ngokukhululekileyo, ngokusuka entliziyweni, kwaye ngaphandle koloyiko lokugwetywa ngomnye.
Ke ukuba iqabane lakho lenze into ukuze liphoxe, oku kufuneka kunxibelelwane ngaphandle kokuziva ngathi kukuzingela igqwirha.
Ukuba udanile kulwalamano ngokubanzi, oku kuya kufuneka kuxoxwe ngendlela engazukubeka tyala kwiqabane lakho.
Enye indlela onokukwenza ngayo oku kukusebenzisa le mithambo ilandelayo.
Hlala ujongane neqabane lakho uxelele ukuba uziva njani kwaye kutheni. Kodwa, okubalulekileyo, zama ukusebenzisa izitatimenti ze 'mna' eziphepha ukuyila ingxaki njengento yokwenza iqabane lakho.
Endaweni yokuthi, 'Awundiqondi kwaphela,' unokuthi, 'Ngamanye amaxesha ndiziva ndingaqondwa kakuhle.'
Okanye endaweni yokuthi, 'Awusoze ubuze ukuba lube njani usuku lwam,' zama ukuthi, 'Xa ungabuzi malunga nosuku lwam, anditsho ndiziva ndithandwa okanye ndibalulekile '
Rhoqo, nqumama ukuze iqabane lakho liphinde libuyele into oyithethileyo ukuqinisekisa ukuba liyayiqonda. Oku kubizwa ngokuba yi-mirroring.
Kulumkele ithoni okanye ulwimi olunokuthi lubonwe ngathi luyasola kwaye uzame ukubambelela kwisihloko esinye kwincoko nganye.
Emva koko nika iqabane lakho ithuba lokuba lithethe, kwaye umamele izinto ezibaxhalabisayo okanye izikhalazo zabo.
Nabani na omameleyo kufuneka aqiniseke ukuba uziva njani omnye uziva. Yazisa ukuba into ethethwa liqabane lakho iyavakala, nokuba ubona izinto ngokwahlukileyo.
Kwaye mabazise ukuba uyayiqonda indlela abavakalelwa ngayo kwaye uyavelana nabo.
Eyona nto iphambili kukugcina incoko ingathathi cala kangangoko kunokwenzeka. Unokuba neemvakalelo zonke iintlobo zeemvakalelo, kodwa zama ukungazivumeli ezi mpembelelo kwindlela oyibeka ngayo ingongoma yakho.
7. Xa Uvavanye Zonke Iindlela
Masithembeke: ayilulo lonke ulwalamano olusebenzayo.
Oko akufuneki kubonwe njengombono ongathandekiyo wothando xa lulonke, kunokuba yinto eyinyani.
Ukuba uzame yonke into ukoyisa iimvakalelo zakho zokudana, kodwa ziyaqhubeka, unokhetho lokugqibela ekufuneka ulwenzile…
Qhubeka nolwalamano ngethemba lokuba uya kuziva ngokwahlukileyo ngexesha, okanye iphele usazi ukuba wenze konke onako.
Yeyiphi indlela okhetha ukuhamba phantsi kwayo kuphela onokugqiba ngayo.
Ngaba awuqinisekanga ukuba ungasondela njani ekuphoxekeni oziva kuko? Thetha kwi-Intanethi kwingcali yobudlelwane kwi-Relationship Hero enokukunceda ufumane izinto. Ngokulula.
Ukuwa Ngothando: Iimpawu ezi-5 zokuziva kwakho ziyaphela
Ngaba Ufanele Utshintshele Umntu Omthandayo?
Kuthetha Ntoni Ukunyaniseka Kubudlelwane?
Ukuba Ufuna Ukubuyela Emathandweni Neqabane Lakho Elide, Yenza Ezi Zinto
Kutheni le nto abanye abantu abatshatileyo behlukana kwaye babuyelane kwakhona?
Wenze Ntoni Ngobudlelwane Obungenabudlelwane kunye noQhagamshelo
izinto zothando ukuzoba intombi yakho
kutheni kubalulekile ukuba nembeko
oku ukwenza xa ukruqukile
Amagama okuncoma umfana ngenkangeleko yakhe
uzenza njani into ongafuniyo ukuyenza